?Tayada iyo tirada ciidanka daraawiishta iyo kuwa booliska gobolka Sanaag aad bay u liitaan? Taliyaha qaybta Sanaag, Gashaanle Guuleed, – Radio Daljir
Badhan, June 03 – Taliyaha qaybta bilayska gobolka Sanaag gaashaanle Cawil C/raxmaan Guuleed ayaa Daljir u xaqiijiyay iney aad u yaryihiin tayada iyo tirada ciidanka daraawiishta iyo kuwa booliska gobolka Sanaag, xili ay ciidanku ay ku jiraan heegan buuxa, isla markaana ay sameeyeen hawl-galo ballaaran oo ku aadan aruurrinta canshuuraadka gobolka iyo adkeynta ammaanka gobolka Sanaag.
Talyaha qaybta gobolka ayaa sidoo kale ka Hadlay hawl-galo baaxad leh oo shaley illaa maantay ay sameeyeen ciidanka ammaanka gobolku, kuwaasoo salka ku haya rabshado iyo dagaallo la isku adeegsadey rasaas oo u dhaxeeya qaar ka mida xaafadaha magaalada Badhan ee gobolka Sanaag.
Gaashaanle Cawil oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegey iney saldhiga dhexe ee Badhan xilligaan ay ku xiran yihiin dad kor u dhaafaya 46 qof kuwaasoo uu sheegey in berrito lasoo taagi doono maxkamad si loo oog dacwadahooda.
Taliyaha qaybta gobolka Sanaag gaashaanle Cawil C/raxmaan Guuleed ayaa maamulka Puntland ugu baaqeyn iney il-gaar ah ku eegaan xaaladda gobolka Sanaag, waxaana sidoo kale uu sheegey in jir shirka burrito ka furmi doona xarunta gobolka looga hadli doono arrimo ay ka mid tahay xaaladda ammaan ee gobolka Sanaag.
Maxamed C/laahi Cali
(Kooshin) Daljir Garowe